လုံးချင်းဝတ္ထုတို - ဝီကီပီးဒီးယား
လုံးချင်းဝတ္ထုတို (အင်္ဂလိပ်: novella) သည် အများအားဖြင့် ပုံမှန် လုံးချင်းဝတ္ထုရှည် တစ်ပုဒ် ထက်ပို၍ တိုတောင်းကာ အကြောင်းအရာကို စကားပြေဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားသည်။ ဝတ္ထုတိုထက်လည်း ပိုမိုရှည်လျှားကြသည်။ နိုင်ငံတကာ၌ "လုံချင်းဝတ္ထုတို" ("novella") (သို့) လုံးချင်းဝတ္ထုရှည် ("novel") အဖြစ် သတ်မှတ်စဉ်းစားရန်အတွက် စာမျက်နှာ (သို့) စကားလုံးအရေအတွက်အား တရားဝင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှု မရှိသေးပေ။ အမေရိက အခြေစိုက် "သိပ္ပံနှင့် စိတ်ကူးယဉ်စာပေရေးသူ အမေရိကစာရေးဆရာများ" က ဤဝတ္ထုအမျိုးအစားကို စကားလုံး ၁၇,၅၀၀ နှင့် ၄၀,၀၀၀ ကြားရှိရမည်ဟု ဖွင့်ဆိုထားသည်။
အင်္ဂလိပ်စကားလုံး "novella" သည် အီတလီစကားလုံး "novella" မှဖြစ်၍ novello၏ ဣတ္ထိလိင်ပုဒ်ဖြစ်ကာ သစ်သော၊ ဆန်းသော ဟူ၍ အနက်ရ၏ ။ ယင်းအီတလီဝေါဟာရသည်လည်း လက်တင်စကားလုံး novellus မှလာခြင်းဖြစ်သည်။ လုံးချင်းဝတ္ထုတိုသည် ဥရောပဘာသာစကားအချို့၏ စာပေအမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
↑ Home : Oxford English Dictionary (in en)။
↑ Smith၊ Jack (October 26, 2018)။ The novella: Stepping stone to success or waste of time? (in en-US)။ “A novella typically starts at about 20,000 words and tops out at 50,000, which is the minimum length forashort novel. There’s no mathematical exactness about this word range, but generally speaking, whenawork fallsafew thousand below 20,000 words, it’sanovelette, and when it falls under 7,000 words, it’sashort story. When it’s 50,000 and climbing, it’sashort novel, until it hits about 80,000 words, and then it’sastandard novel.”
↑ What's the definition ofa"novella," "novelette," etc.?။ 19 March 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Word Count Separates Short Stories from Novelettes and Novellas – International Association of Professional Writers and Editors (in en-US)။
↑ Novella – Definition။7March 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လုံးချင်းဝတ္ထုတို&oldid=626766" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၇:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။